Raila Odinga oo ku baaqay in la joojiyo Mashruuca ay wada Dowlada dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Raila Odinga oo ku baaqay in la joojiyo Mashruuca ay wada Dowlada dalka
Star FM October 10, 2016
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga ayaa maanta sharaxaad ka bixiyay mashruuc ay wado dowlada dalka ,waxuuna ku eedeeyay xukuumada in ay qorsheyneyso mashruucan oo dhibaato ku noqon doono deeganada qaar kamid ah countiyada dalka.
Talaabadan ay dowlada wado ayuu sida uu sheegay Odinga ka dhigan in biyo laga soo jeexo goob lagu magacaabo Aberderes oo ay kasoo baxaan biyaha islamarkaana loo weeciyo Magaalada Tan Nairobi si shacabka reer Nairobi ay biyahaasi uga faa’idestaan.
Mushruucan oo ay ku baxeyso lacag dhan 6.8 Bilyan oo shilin ayuu ku sheegay in sidoo kale la doonayo in biyo laga jeexo webiga Tana River taas oo sidoo kale uu sheegay in ay saameyn ba’an ku yeelan doonto dadka degan Magaaloyinka Garissa, Ukambani, Tana River, Maru’nga kuwaas oo ku tirsan biyahaasi webiga.
Waxaa uu carabka ku dhuftay Mas’ulkan in talaabadan sirta ah oo ay wado Jubilee uu markii hore si aad ah uga soo horjestay wasiirkii hore ee deeganka kaaso hadda geeriyooday.
Dhanka kale Odinga ayaa sheegay in aqalka wakiilada hoose ee Countiga muran’ga oo ka biyo diidan arinta lagu qasbay in ay meel mariyaan.
Hogaamiyaha isbahaysiga Cord ayaa ugu baaqay Madaxweynaha dalka in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo mashrucaasi oo u maal galinayo bangiga aduunka maadama sida uu sheegay ay saameyn ku yeelaneyso shacabka oo aan horay loola tashanin.
Dhanka kale dowlada dhankeeda oo ka jawaabtay hadalkaasi ka baxay Odinga ayaa waxay sheegtay in arintaasi uu markii hore ku lug lahaa Raila sidaas awgeedna uu doonayo sidii u dadka kenyanka magac uga radsan lahaa.
Hogaamiyaha aqlabiyada aqalka barlamanka dalka Aden Barre Ducaale sidoo kelena ah xildhibaanka degmada Garissa ayaa sheegay in mashruucasi uu markii hore dahfuray Odinga 12-kii bishii September 2012-kii xiligaas oo u ahaa ra’iisul wasaaraha dalka, waxuuna intaa ku daray in xaflad lagu dahfuray mashuracasi ay joogen Mas’uuliyinta bangiga aduunka.
← Xaakinada Maxkamada racfanka oo loo soo xulay in ay buuxiso booski ay baneysay Kalpana Rawal
Bulshada Muslimiinta oo loogu baaqay in isu soo bax roob doon ah ay qabtaan →